I-Arnica ijeli: konke odinga ukukwazi 🥇 Thola i-Inthanethi
I-Arnica ijeli: konke odinga ukukwazi
Thola ku-Inthanethi Okthoba 10, 2019 Ezempilo Awekho amazwana
I-Arnica isuka eYurophu futhi yaziwa kakhulu ngokuthi “ugwayi wezintaba” noma i-Arnica montana L. Lesi sitshalo singafinyelela imitha ukuphakama, sinezimbali eziphuzi futhi sikhula ezindaweni zezintaba. Yenzelwe ikakhulu ukucaciswa kwe-arnica gel.
Izimbali zayo, izimpande nama-rhizomes asetshenziswa ngendlela yokwelapha ngoba inezindawo zokuhlobisa nezinzuzo ezilwa nokuvuvukala. Yaziwa njengesitshalo sokwelapha kusukela ngekhulu leshumi nambili Njengamanje isitshalo esisengozini.
Esihlokweni esilandelayo Sizokutshela konke okudingeka ukwazi mayelana nokusebenzisa ukhilimu kwalesi sitshalo esizuzisayo. I-Arnica kakhulu isesimweni sokugcotshwa kwamafutha, okhilimu, ijeli noma owoyela. Ngenxa yokuthi ivuselela ukugeleza kwegazi endaweni lapho kufakwa khona, kunciphisa ukwakheka kwamaqhubu.
Izakhiwo ze-arnica gel
Ngabe i-Arnica ijeli iliphi?
Ezinye izinzuzo ze-Arnica
Iziphi izinto eziphikisayo i-arnica gel enazo?
Ezinye izethulo ze-Arnica zezicelo zangaphandle
I-Arnica iye yathandwa kakhulu ekwelapheni i-rheumatism kanye nemithambo ye-varicose. Iqukethe okungaphezulu kwe Izakhiwo eziyi-10 ezaziwayo. Ezingxenyeni zalo sithola ama-flavonoid, ama-phenolic acid nama-macina, asinika i-rubefacient, i-antibacterial, i-astringent, ukuphulukisa, i-antitumor, i-choleretic kanye nezindawo ezisengozini.
Kodwa-ke, izakhiwo ezibaluleke kakhulu okufanele uzazi:
Izici ze-antiseptic: Iyakwazi ukukhuthaza ukuhamba kwegazi, ukunciphisa izinhlungu futhi isheshise inqubo yokululama.
Izici ze-analgesic: Zisiza kakhulu ukudambisa izinhlungu zamakhanda, ukulimala nokunye ukulimala.
Izici zokulwa nokuvuvukala: Ine-complication ebizwa ngokuthi i-helenalin. Okuchazayo ukuthi kungani i-Arnica isiza ukunciphisa nokunciphisa ukuvuvukala kwezilonda.
Izici ze-antimicrobial: Ine-silicic acid, into eyisisekelo nengumsoco yokwakheka kwezicubu zayo nokwakheka kwesikhumba. Lokhu kwenza kube lusizo kakhulu ukuqeda ukuthukuthela kwesikhumba okuncane.
Izakhiwo ze-Fungicidal Ezimpandeni kuqukethe i-thymol derivatives, esetshenziswa njengama-fungicides nama-preservatives.
Izakhiwo ze-Rubefacient: okungukuthi, iyakwazi ukuvuselela ukujikeleza kwegazi endaweni elifakwa kuyo. Ngakho-ke kubangela ukunyamalala kokulimazeka nemivimbo.
Le ukhilimu iqashelwa ikakhulukazi amandla ayo we-analgesic, anti-inflammatory and rubefacient. Ukujwayela uku:
Amabhampa noma amabhloka
Izinyembezi noma izingqinamba kanye nokulimala kwemisipha
Ama-sprains kanye nama-dislocations
Izimpawu zokunwebeka zokukhulelwa
Izilonda ezingavuthiwe, i-eczema yesikhumba nomqubuko
Ngaphezu kwalokho, izici zalesi sitshalo zinikeza umphumela wethoni ngaphambi nangemuva kwanoma imuphi umsebenzi womzimba owenziwayo.
Ngenxa yenani layo elikhulu lezinzuzo, i-arnica yaziwa nangokuthi: "Usanta omkhulu wezicubu nemivimbo." Ngaphezu kwezinzuzo ze-analgesic nezokulwa nokuvuvukala singakuqokomisa okulandelayo:
Ukhumbula izinhlungu ebuhlungwini.
Isheshisa ukululama kwe-dislocations kanye nama-sprains.
Yehlisa ukuvuvukala, izinhlungu nokuqina kwesifo samathambo.
Ikhipha ukulunywa kwesitho sangasese sowesifazane.
Ilungiselela ukuphulukiswa kwenxeba.
Kuyasiza ukugcina impilo efanelekile yomlomo njengama-rinses ku-tincture.
Ilawula amafutha esikhumba.
Ikhulula izinhlungu ezihlangene, ze-neuronal nezemisipha.
Ukulwa izinduna kanye neminye imikhiqizo yesikhumba.
Kuthuthukisa ukuphuma kwegazi ebusweni.
Iqiniso elibalulekile ukuthi ebasebenzisa i-arnica ngokwelashwa kokwelashwa kwamaseli womdlavuza yamaphaphu nekholoni
Zonke izitshalo ezinemiphumela yezempilo nazo zinemiphumela emibi futhi zingadala ukusabela okungafuneki, ngakho-ke, kulula kakhulu ukwazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani
Ungasebenzisi ezilondeni ezivulekile.
Akunconyelwe isikhumba se-atopic nesobucayi.
Ukungezwani komzimba kuya ku-Asteraceae noma izitshalo eziyinhlanganisela.
Phakathi kokusabela okungahambi kahle okungenziwa kukhiqizwe ukusetshenziswa kabi okucasulayo, amabhulukwe kanye nesikhumba. I-Arnica kufanele isetshenziswe ngamanani alinganiselayo, ngcono kakhulu uma kunconywe uchwepheshe. Lesi sitshalo esidakwe ngamanani amakhulu singaba ubuthi, sibangele ukucasuka komlomo nomphimbo, nezinye izimpawu ezifana nokuhlanza, ukuqaqamba kwesisu.
Amafutha e-Arnica alungiswa nezimbali zezitshalo ezikhiqiza uwoyela ophuzi nonamakha. Kusetshenziswa amakha kanye nakuma-lotions amaningi kanye nama-ton-anti-dandruff tonics wezinwele. Sincoma ukuthi uthathe ukunakekelwa okukhethekile lapho usebenzisa i-arnica oil, ikakhulukazi uma isesimweni samafutha abalulekile afakiwe.
Isethulo se-gel sizosiza ngokuphumelelayo ekunciphiseni ukwethuka nokukhathala kwemisipha kusebenzisa ngokugcwele impahla yokulwa nokuvuvukala. Kuyinto elula futhi ukuyisebenzisa, ngoba igxila ngokushesha. Ngokuya kokulimala, ingasetshenziswa ngokusebenzisa ukushisa noma ukubanda.
Kodwa-ke, isethulo esetshenziswa kakhulu yilesi ukhilimu we-arnica ngezinzuzo esishilo. Sikulinda eposini elandelayo enemininingwane ewusizo kakhulu kuwe. Silandele ekuxhumaneni kwethu nomphakathi futhi wabelane ngalesi sihlahlandlela nomndeni wakho nabangane. I-Arnica ijeli: konke odinga ukukwazi - Fisilax
kuyini nemiphumela emibi
Siyini isici segazi le-Rh?
Yazi izinzuzo ze-collagen
Izimpawu nokwelashwa kwe-pulmonary lymphoma
Ubuhlungu besisu: Izimbangela ezihambisana nalezi zimpawu
Ukwelashwa kwesifo se-Chagas